Ujeedka Mareykanka uu ka leeyahay howlgalka AFRICOM ee qaarada Africa – Bandhiga
Ujeedka Mareykanka uu ka leeyahay howlgalka AFRICOM ee qaarada Africa
Taliska Mareykanka qaaradda Africa ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa howlgallada qaaradda Africa bilaabay 2008, waxaana uu Mareykanka uu ka howlgeliyay Kumanaan Askar iyo diyaarado Drones ah oo duqeymo la eegtay kooxaha loogu yeero argagisada.
AFRICOM ayaa shaqo ku leh danaha Mareykanka ee Qaarada Africa sida Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Jabuuti.
Siyaasad qorsoon oo sirdoonimo ah ayuu Mareykanka u joogaa dalalka Africa, ciidamadiisa waxey ka fuliyaan Africa howlgallo qorsheysan iyo weeraro ay dhibaato ka soo gaarto dalalka Africa.
Ujeedka ugu weyn ee AFRICOM ayaa ah nabad galyada gobalka iyo danaha Mareykanka ee qaaradda.
Waxaa xusid mudan in Africa ay ka howlgalaan argagixiso kobceysa tan iyo sanadii 2010, 13 dal oo African ah ayey sitoos ah weerao uga geestaan, sida xaruntya daraasadda Africa ay sheegtay.
Howlgallada Mareykanka uu kawada Africa waxey u muuqdaan kuwa aan lagu soo afjari Karin kooxahan oo lagu doonayo kaliya siyaasad ku dhisan Istaraatiijiyad oo Africa lagu buunbuuniayo iney argagixiso ka soo socoto.
Al shabaabka ka howlgala Soomaaliya waxba uma dhimaan howlgallada dhulka ah iyo kuwa dyaaradaha ee Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya, waxaa muuqato iney awoodooda sii zaa’iday Laadii sano ee ugu dambeesay kadib markii AFRICOM ay balaarisay howlgalladeeda qaaradda gaar ahaan Soomaaliya.
Mareykanka ayaa dagaal ku jira koox walba oo uu u arko in dalkeeda dhibaato kaga imaan karto.
Mareykanka ayaa qorsheynaya in saldhigyo waa weyn uu ka furto Africa, waxaana jira tartan dowladaha horumaray ay ugu jiraan dalalka Africa.
Ruushka iyo Shiinaha ayuu doonayaa Mareykanka inuu kaga guuleysto siyaasadda Africa iyo waliba Soomaaliya.